Uyenza Kanjani I-GIF Epopayi Yomkhankaso Wakho Olandelayo Wokuthengisa Nge-imeyili Usebenzisa I-Photoshop | Martech Zone
Uyenza Kanjani I-GIF Epopayi Yomkhankaso Wakho Olandelayo Wokuthengisa Nge-imeyili Usebenzisa I-Photoshop
NgoLwesihlanu, January 28, 2022 NgoLwesihlanu, January 28, 2022 Douglas Karr
Sinesikhathi esimangalisayo sokusebenza neklayenti elingukhiye Closet52, i isitolo sezingubo eziku-inthanethi esazimaka futhi sakhela inkampani yemfashini esungulwe neyaziwayo eNew York kusukela phansi. Ubuholi babo buhlala busebenza nathi emibonweni yokuhlanganyela yomkhankaso noma isu elilandelayo esilenzayo. Njengengxenye yokuqaliswa kwazo, satshalaliswa Klaviyo ngoba I-Shopify Plus. I-Klaviyo iyiplathifomu yokumaketha eyaziwayo enokuhlanganiswa okuqinile kwa-Shopify kanye nezinhlelo zokusebenza eziningi ze-Shopify.
Isici engisithanda kakhulu kimina yibo A / B ukuhlolwa e klaviyo. Ungakwazi ukuthuthukisa izinguqulo ezahlukene ze-imeyili, futhi u-Klaviyo uzothumela amasampula, alinde impendulo, bese ethumela ababhalisile abasele inguqulo ewinile - konke ngokuzenzakalelayo.
Iklayenti lethu libhalisela ama-imeyili emfashini embonini futhi laqhubeka nokuphawula ukuthi liwathande kangakanani amanye ama-imeyili ngombukiso wesilayidi wezithombe zomkhiqizo. Babuze ukuthi singakwenza yini lokho futhi ngavuma futhi ngakha umkhankaso ngokuhlolwa kwe-A/B lapho sithumele khona inguqulo eyodwa enopopayi wemikhiqizo engu-4, nenye enesithombe esisodwa, esihle, esimile. Umkhankaso owokuqhunyiswa kwezibhamu ukudayiswa kwezingubo zabo zokuwa njengoba beletha imigqa emisha yomkhiqizo.
Inguqulo A: I-GIF Egqwayizayo
Inguqulo B: Isithombe Esimile
Ikhredithi yesithombe iya kubantu abanamakhono ku Zeelum.
Amasampula omkhankaso asasebenza njengamanje, kodwa kusobala ukuthi i-imeyili enesithombe esigqwayizayo isidlula kude isithombe esimile… cishe isilinganiso esivulekile esingu-7%.... kodwa kuyamangaza Izikhathi ezi-3 kunezinga lokuchofoza (CTR)! Ngicabanga ukuthi iqiniso lokuthi i-GIF epopayi ibeke izitayela ezimbalwa ezihlukene phambi kwababhalisile kuholele ezivakashini eziningi kakhulu.
Uyenza kanjani i-GIF epopayi usebenzisa i-Photoshop
Angiyena noma yiluphi uhlobo lochwepheshe nge-Photoshop. Eqinisweni, izikhathi kuphela engivame ukuzisebenzisa I-Photoshop ye-Adobe Creative Cloud ukususa ingemuva kanye nokwendlalela izithombe, njengokubeka isithombe-skrini phezu kwekhompuyutha ephathekayo noma idivayisi yeselula. Kodwa-ke, ngimbe ku-inthanethi futhi ngathola ukuthi ngenza kanjani upopayi. I-interface yomsebenzisi yalokhu ayilula kakhulu, kodwa phakathi nemizuzu engu-20 futhi ngemva kokufunda ezinye izifundo, ngikwazile ukuyikhipha.
Ilungiselela izithombe zethu zomthombo:
Ubukhulu - Ama-GIF opopayi angaba makhulu impela, ngakho ngenze isiqiniseko sokuthi ngimisa ubukhulu befayela lami le-photoshop ukuze lifane ncamashi nobubanzi besifanekiso se-imeyili esibanzi esingu-600px.
Ukucindezela - Izithombe zethu zangempela bezinokucaca okuphezulu nosayizi wefayela ophakeme kakhulu, ngakho ngawashintsha futhi ngawacindezela ngawo Kraken kuma-JPG anosayizi wefayela omncane kakhulu.
Izinguquko - Nakuba ungase ulingeke ukwengeza izithombe ezinyakazayo ishumi nambili (isb. ukuguquka okufiphalayo) phakathi kwamafreyimu, okwengeza usayizi omningi kufayela lakho ukuze ngigweme ukwenza lokho.
Ukwakha izithombe ku-Photoshop:
Dala ifayela elisha ngobukhulu obufana nobukhulu obufanayo obubeka kusifanekiso sakho se-imeyili.
Khetha Iwindi > Umugqa wesikhathi ukuze unike amandla ukubuka komugqa wesikhathi kusisekelo se-Photoshop.
Engeza ngayinye isithombe njengesendlalelo esisha ngaphakathi kwe-Photoshop.
Chofoza Dala i-Frame Animaendaweni yomugqa wesikhathi.
Ngakwesokudla kwesifunda somugqa wesikhathi, khetha imenyu ye-hamburger bese ukhetha Yenza Ozimele Ngezendlalelo.
Ngaphakathi kwesifunda somugqa wesikhathi, ungakwazi hudula amafreyimu ngohlelo ongathanda ukuthi izithombe zivele kuzo.
Chofoza ifremu ngayinye lapho ithi 0 sec, bese ukhetha isikhathi ongathanda ukuthi lolo hlaka lubonise ngaso. Ngikhethile 2.0 amasekhondi uzimele ngamunye.
Kokudonsela phansi ngezansi kozimele, khetha Forever ukuqinisekisa ukuthi ukugqwayiza kuyahamba ngokuqhubekayo.
Chofoza Dlala Inkinobho ukuze uhlole kuqala ukugqwayiza kwakho.
Chofoza Ifayela > Khipha > Londoloza Iwebhu (Ifa).
Khetha GIF kusukela kuzinketho ezingaphezulu kwesokunxele sesikrini sokuthekelisa.
Uma izithombe zakho zingabonakali, susa ukumaka Transparency inketho.
Chofoza Londoloza futhi uthumele ifayela lakho.
Yilokho kuphela! Manje usune-GIF yopopayi ongayilayisha endaweni yakho ye-imeyili.
Ukudalula: Ikhishi52 uyiklayenti lenkampani yami, Highbridge. Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kuso sonke lesi sihloko I-Adobe, Klaviyo, Kraken, Futhi Thenga.
Tags: ukuhlolwaadobeifu lokudala le-adobeadobe Photoshopgif animatedukukala-nge-rateifu lokudalactrezokuhweba ngekhompyuthaimeyili ye-ecommercei-imeyili animated gifumkhankaso we-imeyiliimeyili Marketingukuhlolwa kwe-imeyilihighbridgeindlelaungayenza kanjani i-animated gifUkuminyaniswa kwesithombeKlaviyoKrakenumkhankaso wokumakethaisilinganiso esivulekileIzithombehopi-photoshop gifokokufundisa i-photoshopthenga
Ungakumisa Kanjani Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili Nge-Microsoft Office (SPF, DKIM, DMARC)